ပစ္စုပ္ပန် – The Only Way To Go!
Posted on May 22, 2011 by barnay
ဒီခေါင်းစဉ်ကို မြင်လိုက်တာနဲ့ ဘာကိုဆိုလိုမှန်း သိနေတဲ့ သူချည်းပါပဲ .. ဒါပေမဲ့ ထပ်ဆင့်ပြီး ဘာဆိုချင်တာလဲဆိုတာကို ဆက်ပြီး စူးစမ်းချင်စိတ်ကြောင့် ယခု ကျနော်ရေးတဲ့ စာကို ဆက်ဖတ်နေခြင်းပါ .. ဟုတ်ကဲ့ အမှန်အားဖြင့်တော့ လူတွေဟာ စူးစမ်းချင်တတ်တဲ့ သဘောကြောင့်ပါ ယခု ကျနော်ရေးသော ပို့စ် အမည် ပစ္စုပ္ပန် ဆိုတာ သာမန်အားဖြင့်တော့ ယခု လက်ရှိ လုပ်ဆောင်နေသော အချိန် ကို ဆိုလိုခြင်းပါ … ။
လုပ်ဆောင်ချက်တွေအားလုံးဟာ ပစ္စုပ္ပန်မှာသာ တည်နေတာပါ ။ ယခုအချိန်ဟာ အရေးကြီးတဲ့ အချိန်ပါ ။ ကျနော်အပါအဝင် လူတိုင်း လူတိုင်း အဲ့ဒီ အရေးကြီးတဲ့ ယခုလက်ရှိ ပစ္စုပ္ပန် အချိန်ကို တန်ဖိုးထားမှု နည်းနေပါသေးတယ်။ လူတိုင်းကို ပြောချင်မိပါတယ် … “မိမိဘဝကို တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင် ယခုလက်ရှိ ပစ္စုပ္ပန်ကို တန်ဖိုးထားပါ” လို့ .. ဘာလို့လဲဆိုရင် ပစ္စုပ္ပန်သည်သာ လူ့လောကမှာ အသက်ရှင်နေတဲ့ အရာတစ်ခုပါ … ပြီးခဲ့တဲ့ အချိန်တွေက သေပြီးသားအရာ ပါ နောင်လာမဲ့ အချိန်တွေက မွေးဖွားလာမဲ့ အရာတွေပါ . ဒီတော့ ယခု.. လက်ရှိအချိန်ကို တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင် အချိန်တွေနဲ့ အမျှ အကျိုးရှိလာပါလိမ့်မယ် ။
ကျနော် တခါတခါ စဉ်းစားမိတယ် .. ငါဘာကြောင့် အချိန်တွေကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးမချတာလဲလို့ပေါ့ .. မိမိစိတ်ထဲမှာတော့ အချိန်တွေက တန်ဖိုးရှိမှန်းသိတယ် .. တကယ်လက်တွေ့မှာ ဘယ်လိုတန်ဖိုးရှိအောင် အသုံးချရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ မသိတော့ဘူး .. ။ အဲ့ဒီလိုနဲ့ မသိဘာသာ နေရင်း နေရင်းနဲ့ အချိန်တွေက ကုန်ကုန်သွားတယ် .. တနေ့ပြီး တနေ့ ကူးကူးသွားတယ် .. တစ်လပြီး တစ်လ ပြောင်းပြောင်းသွားတယ် တစ်နှစ်ပြီး တစ်နှစ် အသက်တွေကြီးကြီးလာတယ် … ကြာလာတော့ ကိုယ်ဖြတ်သန်းနေတဲ့ဘဝကိုတောင် ဘဝမှန်း သေချာ မသိခဲ့ပြန်ဘူးလေ… ။ တွေးကြည့်မှ ဒါဘဝတဲ့လား ဆိုတဲ့ အသိပဲ ဝင်မိတယ် ။
လူတစ်ယောက်မှာ … သာမန်အားဖြင့် သာယာမှုအပေါ်မှာ ခံစားလိုစိတ်က အမြဲလိုလိုရှိနေတတ်တယ် .. ဒါကြောင့် သတိမထားပဲ နေတဲ့သူတွေက မသိမသာနဲ့ သာယာမှုအပေါ်မှာ ခံစားနေရင်း ပျင်းရိလာကြတယ် ဒီလိုနဲ့ အကျင့်တွေစွဲလာတယ် ပြီး စရိုက်တွေ ဖြစ်လာတယ် . နောက်တော့ ကိုယ်က ဘာကြောင့် ခုလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို သိတောင် မသိပဲ ဖြစ်သွားတယ် ။ ဒါ သာယာမှုကို ခံစားလိုစိတ်ကနေ စတင်လာတာပါ ။ ဘယ်လိုသာယာမှုလည်းဆိုရင် အလုပ်လုပ်ရတာက ဆင်းရဲတယ် ဆင်းရဲတာကိုလူတိုင်း မလိုချင်ကြဘူး .. ဒီတော့ မဆင်းရဲတာကို ခံစားချင်တဲ့ စိတ်ကြောင့် အလုပ်ကို ရှောင်လွှဲလို့ရသမျှ ရှောင်လွှဲတယ် ..အဲ့လိုနဲ့ သာယာမှုကို ချဉ်းကပ်တယ် ပြီးတော့ ပေါ့လျှော့လာတယ် နောက် နိမ့်ကျလာတယ် နောက် ဆင်းရဲလာတယ် နောက် စိတ်ဓါတ်ကျလာတယ်… နောက် ဒီ့ထက်ပိုဆိုးတာက ပညာတွေ နည်းလာတယ် ..အဲ့ဒီလိုနဲ့ ဘဝတစ်ခုလုံးဟာ တန်ဖိုးတွေ လျှော့လာတယ် ။
အဲ့ဒီအရာတွေဟာ တားဆီးနိုင်မှ မတားဆီးနိုင်ရင် ပိုပိုဆိုးလာတယ် .. ဥပမာ တောင်ထိပ်မှာရှိတဲ့ ရေအိုင် တစ်အိုင်ကို အောက်ဘက်ထိ မစီးအောင် တားရာမှာ .. အောက်ဘက်ကနေ တားတာထက် တောင်ထိပ်အစကတိုင် တားမှ ရေဟာအောက်ကို မဆင်းမှာပေါ့ .အောက်ဘက်ကနေ တားရင် ရေတွေ အကုန်လုံးဆင်းလာပြီး တားလို့မနိုင် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်. ထို့အတူ ယခု ကျနော်တို့ ရဲ့ စရိုက်လုပ်ရပ် အကျင့်တွေကို နောက်မှ တားခြင်းထက် ယခု ပစ္စုပ္ပန်အချိန်ကတိုင် တားမှ ထိရောက်ပါလိမ့်မယ် .နောက်ဆိုတာသည် မသေချာ မရေရာ . မနိုင်မနင်း အခြေအနေပါ ။ ဒီတော့ ပစ္စုပ္ပန်ဆိုတဲ့ ယခုလောလောဆယ် ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်တွေမှာ မကောင်းဘူးလို့ ထင်တဲ့ အကျင့်တွေ ပြင်ပါ .. ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အကျင့်လေးတွေကို မွေးမြူပါ … စမ်းလုပ်ကြည့်ပါ …။ ဒါမှ ကျနော်တို့ လိုချင်တောင်းတတဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝဆိုတာ ပုံပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ..။
လူတစ်ယောက်မှာ သာမန်အားဖြင့် အသိဥာဏ်ရှိပါတယ် .. ကိုယ်လုပ်လိုက်တဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုဟာ ကောင်းကျိုးပေးသလား မပေးသလားဆိုတာ ဝေခွဲနိုင်တဲ့ အသိရှိပါတယ် .. အများစုက အသိတင်ရပ်ထားပြီး လက်တွေ့မှာ အလွယ်လမ်းလေးတွေကို လိုက်နေကြပါတယ် .. ဒီလိုနဲ့ တိုးတက်သင့်သလောက် မတိုးတက်ပဲ ဖြစ်နေကြပြီး အချိန်တွေကြာလာတာနဲ့ အမျှ .. လူဆိုး .. လူကောင်း . လူဆင်းရဲ လူချမ်းသာ . ရိုးသားသူ နဲ့ လူလိမ် စသည်ဖြင့် ပုံပေါ်လာကြပါတယ် ။ အဲ့ဒီလို ဖြစ်မသွားအောင် တားဆီးပေးနိုင်တဲ့ တစ်ခုတည်းသောအရာကတော့ ပစ္စုပ္ပန်ဆိုတဲ့ ယခုအချိန် လုပ်ဆောင်ခြင်းပါပဲ ။
ပစ္စုပ္ပန်မှာ လုပ်ချင်တာတွေ လုပ်လို့ရပါတယ် . ယခု ကျနော်စာရေးနေစဉ်မှာ ကျနော် မကောင်းတဲ့စာတွေကို လည်း ရေးနိုင်သလို ကောင်းတဲ့ စာတွေကိုလည်း ရေးနိုင်ပါတယ် ကိုယ့်အသိဥာဏ်ကိုယ်သွားချင်တဲ့ လမ်းကသာ အဓိက ကျသွားပါတယ် … ယခု စာဖတ်သူအနေဖြင့်လည်း ခုအချိန်မှာ ကောင်းတဲ့ စာတွေကို ရွေးဖတ်နိုင်သလို မကောင်းတဲ့စာတွေကိုလည်း ဖတ်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ် …။ အဲ့ဒီ့ ရွေးချယ်ခြင်းတွေ ကွဲပြားခြင်းမှာ .တကယ်တော့ အသိဥာဏ်နဲ့ လုပ်ဆောင်မှုက ပိုင်းဖြတ်သွားကြတာပါ ။
ကျနော်အပါအဝင် အများစုဟာ တနေ့တနေ့ နဲ့ အချိန်ကုန်သွားတာတွေကို ညဘက် အိပ်ခါနီးမှ သတိထားမိလာတတ်ပါတယ်။။။ .။ အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလည်း ကုန်သွားပြန်ပြီဆိုတဲ့ အသိထက် တခြား ရေရေရာ ပိုမတွေးနိုင်ခဲ့ပါ..။ တချို့တချို့ကတော့ ဘဝကို တန်ဖိုးရှိအောင် နေဖို့တော့ တွေးမိချင် တွေးမိကောင်းပါလိမ့်မယ် .. ။ ဒါပေမဲ့ နောက်တနေ့ နိစ္စဓူဝ တွေနဲ့ကြုံသွားတဲ့ အခါ ပြီးခဲ့တဲ့ မနေ့တွေကလို အဲ့ဒီနေ့ဟာလည်း ပဲ့ပဲ့သွားရင်း အဆုံးသတ်သွားတာပါပဲ ။ ဒါဘာတွေကြောင့်လဲ ဆိုရင် ကျနော်တို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိလို့ပါ ။
ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုစိတ်ရှိပေမဲ့ လည်း လူတိုင်း မတတ်နိုင်ပါ ။ ထိုအလုပ်ဟာ မလွယ်ပါဘူး ။ ဘာလို့လဲဆို အလွယ်တွေကို ကြိုက်ပြီး လိုက်လုပ်တတ်တဲ့ သူတွေက များနေလို့ လို့ပါ ။ ဒီတော့ လူတိုင်း ထိုအလုပ်ကို လုပ်နိုင်ကြလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ် .။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းဟာ တစ်ကြိမ်ပြောင်းလဲရုံဖြင့် မရပါ ။ နှစ်ကြိမ်ပြောင်းလဲရုံဖြင့်လည်းမရပါ ။ အကြိမ်တိုင်းပြောင်းလဲရပါမယ် ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆို ပြောင်းလဲခြင်းများလာမှ အကျင့်ဆိုတာ ဖြစ်လာတာမို့လေ .. အကျင့်ဖြစ်လာမှ စရိုက်အဖြစ် ပြောင်းသွားမှာပေါ့ ။အဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲခြင်း လက်တွေဖြစ်လာဖို့ဆိုရင် သတိရနေတဲ့ အချိန် ဖြစ်တဲ့ ယခုချက်ခြင်းမှာ လုပ်မှ ရပါမယ် .။ ဒီတော့ ယခု ဟု ခေါ်ဆိုသော ပစ္စုပ္ပန်သည် လုံးဝ အသက်ရှင်နေတဲ့ အရာတစ်ခုပါ ။ အရေးလည်းပါနေတာမို့ မျက်ကွယ် မပြု စိတ်မဝင်စားပဲ မနေပါနဲ့လို့ သာ သတိပေးချင်နေမိပါတယ် .။
မည်သည့် လုပ်ရပ်အတွက်မဆို ပစ္စုပ္ပန်သည်သာ အဓိကမို့ မိမိစိတ်အစဉ်မှာ သတိရှိနေပြီး ဥာဏ်မျက်စိဖြင့်သာ လောကကို အလှဆင်ပါ။ ဒီအကြောင်းကို ယခုမသိသော် သေခါနီးမှ သိပါလိမ့်မည် ။ သေခါနီးမှ မသိသော် ဘယ်သောခါမှ သိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ….။ ယခု လူ့လောကမှာ မသိမြင်ခြင်း အဝိဇ္ဇာတွေ များနေသ၍ လောကတန်ဖိုး လူ့တန်ဖိုးဆိုတာ ဈေးကျနေပါလိမ့်မည် ။ မိမိသည်သာ မိမိအတွက် အားကိုးရာ ဖြစ်ပါသည် ။
6 thoughts on “ပစ္စုပ္ပန်”
Good article to think !
Right ,we should spend our time usefully.
Thank you so much. MY dear friend. mathu. 🙂
Mg Mg Kyaw says:
တကယ်ကိုဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်ဗျာ အခုလိုတန်ဖိုးရှိတဲ့စာတွေ များများရေးနိုင်ပါစေဗျာ..
ကျေးဇူးညီငယ်လေး ..ကိုမောင်ကျော် .. ဟုတ် ဆက်ရေးမှာပါ.. လှမ်းနိုင်သ၍ပေါ့ဗျာ …
မင်းမှာလည်း လေးနက်တဲ့ စိတ်ရှိလို့ ဒါတွေ နားလည်နိုင်တာပါ ညီလေးရာ